Maxaabiis kujirtey xabsiga Guantanamo oo lageeyey Imaaraadka. – Radio Daljir
Maxaabiis kujirtey xabsiga Guantanamo oo lageeyey Imaaraadka.
Agoosto 16, 2016 12:17 b 0
Guantanamo, Aug 16 2016– Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegaysa in 15 qof oo lagu hayay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba loo wareejiyay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Warbaahinta dalka Maraykanka ayaa sheegtay in 12 maxbuus oo ka mid ah dadkaasi ay u dhasheen dalka Yemen sidoo kalana ay jiraan kuwo u dhashay dalka Afghanistan.
Maxaabiistaani ayaa noqon doonta tiradii ugu badnayd ee maxaabiis ah oo laga wareejiyo xabsiga ugu weyn aduunka mudadii labada jeer ahayd ee uu xilka hayey madaxweyne Barack Obam.
Madaxweyne Gaas oo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare.
Dowladda oo war kasoo saartay howlgaladii Jubbada dhexe kasocdey.